Imibala iyenza njani impembelelo yokuThenga? | Martech Zone
Inzululwazi yemibala inomdla, ngokoluvo lwam. Abaqulunqi abakhulu- nokuba zezemoto, izinto zokuhombisa amakhaya, abayili bemizobo, okanye abaphuhlisi bojongano lomsebenzisi bayabuqonda ubunzima bemibala kunye nokubaluleka kwazo. Isuka e iphalethi yombala ikhethwe ukuqinisekisa ukuba ibonelela ngemvisiswano - kwimbala esetyenzisiweyo- inefuthe elibonakalayo kwindlela yokuziphatha komsebenzisi.
Funda ngakumbi malunga neMibala kunye neePhalettes zemibala
umbala yonyusa ukwamkelwa kwegama nge-80%, ekhokelela ngokuthe ngqo kukuzithemba kwabathengi. Nantsi indlela imibala echaphazela ngayo abathengi baseMelika:
Lubhelu -Ukuba nethemba kunye nolutsha, kuhlala kusetyenziswa ukubamba abathengi beewindows.
Bomvu - amandla, kudala ukungxamiseka, kunyusa izinga lentliziyo, kwaye kuhlala kusetyenziswa ukuthengisa kugqityiwe.
Luhlaza -Yenza imvakalelo yokuthemba kunye nokhuseleko. Imibala emnyama ihlala ibonwa ngeebhanki kunye namashishini (njengemveliso zam).
Luhlaza - ehambelana nobutyebi. Umbala olula wamehlo ukuwucwangcisa ukuze usetyenziswe ezivenkileni ukuze uphumle.
orenji - ndlongondlongo. Oku kudala umnxeba osishukumisayo ukuba ubhalise, uthenge, okanye uthengise.
pinki - ezothando nezesifazana, ezisetyenziselwa ukuthengisa iimveliso kubafazi nakumantombazana amancinci.
Mnyama - inamandla kwaye intle. Isetyenziselwa ukuthengisa iimveliso zodidi.
Mfusa - isetyenziselwa ukuthomalalisa kunye nokuzola, ihlala ibonwa kubuhle nakwimveliso yokuguga.
Kubathengisi, ukuthenga kubugcisa bokucenga. Nangona zininzi izinto ezinefuthe kwindlela abathengi bathenga ngayo kwaye bathenge ntoni. Nangona kunjalo, into enkulu igqitywa yimikhombandlela ebonakalayo, eyona yomeleleyo kunye neyona ichukumisayo ukuba ngumbala. Xa kuthengiswa iimveliso ezintsha kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba abathengi babeka imbonakalo ebonakalayo kunye nombala ngaphezulu kwezinye izinto ezinje ngesandi, ivumba kunye nokuthungwa.
Imibala izichaphazela njani iiNketho zoMsebenzisi kunye neeNtengo?
Nantsi inomdla kwi-infographic ukusuka kwi-KISSmetrics kumbala kunye nefuthe layo kwizigqibo zokuthenga. Olunye ulwazi:
Ukukhuthaza abathengi - kunokwenzeka ukuba basabele kubomvu, orenji, mnyama, kunye naseblue blues. Uyabona le mibala kukutya okukhawulezayo, iivenkile ezinkulu, kunye nentengiso yokuthengisa.
Abathengi boHlahlo-lwabiwo mali -Bona kunokwenzeka ukuba basebenzisane ne-navy blues kunye neetali, ezibonwe kwiibhanki nakwiivenkile ezinkulu zesebe.
Abathengi beMveli - banomdla kwiipinki, isibhakabhaka esibhakabhaka, kunye nemibala evukayo efumaneka kwiivenkile zeempahla.
Inqaku elinye elibalulekileyo kwi-infographic kukuba iinkcubeko ezahlukeneyo zichaphazeleka ngemibala eyahlukileyo!
tags: mnyamaeluhlaza obuluhlazantsunduumbalaurhweboeCommerceKutshaorenjiindlela yokuziphatha yokuthengabomvuukufikelela ngokwenyani
I-SMS ayifanga. Wakhe weva ngokuBiyelwa kweGeo?
Sep 17, 2010 kwi-9: 40 AM
Oku kunomdla ngokwenene!
Oku kufumanisa kuyothusa ... bendicinga ukuqhuba intengiso ekhethekileyo kungekudala kubathengi bam "kuhlahlo-lwabiwo mali". Kwaye ngoku ndiyazi ukuba yeyiphi imibala emandiyisebenzise!
Enkosi ndoda! Ngokubhekisele kwi-Manning "elungileyo" (uyazi, yeyona nto eyi-QB!) 😉
Novemba 9, 2011 ngo-7: 01 PM
Iluncedo kakhulu. Bendicinga nje loo nto ngoku bendisenza incwadi egubungela ngenye imini. Enkoso ngokwabelana!
Novemba 9, 2011 ngo-7: 34 PM
Nov 14, 2011 kwi-10: 09 AM
Novemba 14, 2011 ngo-4: 59 PM
Iposi egqwesileyo uDouglas, i-inforgraphic yakho ibonelela ngesixhobo esihle sokujonga. Ndiyayithanda isayikholoji yemibala kunye nefuthe labo kwintengiso. Xa usenza inkcazo yemibala, akunzima ukukhumbula ngokukhawuleza imizekelo exhasa nganye nganye.